I-China 62-44-2, abavelisi bePhenacetin kunye nabathengisi | Dumi
Factory Lixabiso Hot 4-Piperid ...
Siqinisekisa ukuba iphakheji yakho iya kudlula kwi-100% nge-US, UK, Australia, Netherlands, Canada, France, Germany, Spain, Belgium, Sweden, Poland, Russian, Ukraine, Kazakhstan, Czech Republic, Slovakia, Portugal.
Wamkelekile kwi I-Shanghai Dumi Biotechnology Co, LTD. Dumi lishishini eliphambili lokukhula eliphakathi kwamayeza eliseShanghai.
Dumi Uhlalutyo lophando kunye neziko lophuhliso likwabonelela ngenkonzo yokuhanjiswa kwesiko
I-Shanghai Dumi Biotechnology Co, LTD inokubonelela ngemichiza eyenziweyo eyenziwe ngokwamanani ahlukeneyo kwiilebhu, kumafektri nakwinqanaba loshishino.
Sinokubonelela ngexabiso lokhuphiswano kuye wonke umthengi kwaye siqinisekise umgangatho weemveliso zethu.
Sinikela ingqalelo kwiimfuno zomthengi ngamnye kwaye sakhe ubudlelwane obuhle kunye nabo.
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo ngam. Nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi.
I-Shanghai Dumi Biotechnology Co, umgangatho wemveliso ka-LTD ukhokelela e-China. Kwangelo xesha, phantsi kwemizamo edibeneyo yabo bonke abasebenzi benkampani, inkampani iphumelele ukukhula ngokukhawuleza. Umgangatho weemveliso zethu uzinzile kwaye unokwethenjelwa, kwaye simisele ubudlelwane bobuhlobo kunye nozinzo kumashishini amaninzi awaziwayo ekhaya nakumazwe aphesheya. Iyunithi yam ibamba umbono olungileyo wolawulo lokholo, ihlala kuqinisekiso lomgangatho, injongo yokuqala yomsebenzisi, ibonelela ngomgangatho obalaseleyo, imveliso yokusebenza ezinzileyo kumthengi, iphumelele umthengi jikelele ukuvunywa okungaguqukiyo kunye nokuthandwa kukugqitywa kokusebenza okuphezulu emva- inkonzo yokuthengisa. Sijonge phambili ekusebenzeni noontanga kunye nabahlobo bethu abavela kuzo zonke iinkalo zobomi ukwenza ikamva elitsha.
Egqithileyo I-4-Methylpropiophenone CAS: 5337-93-9
Okulandelayo: Umzi mveliso ngokuthe ngqo unikezela ngeBenzylisopropylamine CAS 102-97-6
1. Ukukhetha izinto ezingqongqo ngokungqongqo, iimveliso zethu zezona zisulungekileyo kakhulu.
Ixabiso 2.Reasonable kunye nokhuphiswano. Ukubonelela ngeenkonzo ezilungileyo kunye nezobugcisa.
Ukuhanjiswa okukhawulezileyo kweesampulu, iisampulu kwisitokhwe. Indlela ethembekileyo yokuthumela.
Amava apheleleyo e-4 amanani amakhulu alayishe kwizibuko lolwandle lwaseTshayina.
5. Eyona nto ibalaseleyo emva kwenkonzo emva kokuthunyelwa.
6. Amaxwebhu obuchwephesha kwimvume yakho yesiko.
Q1: Ngaba uya kubonelela ngeesampuli zovavanyo?
A: Iisampulu zasimahla zovavanyo lomgangatho kwiimveliso ezininzi, kodwa abathengi kufuneka benze umrhumo wokuhambisa ngenqanawa ukuhambisa iisampulu emnyango wakho.
I-Q2: Yintoni i-MOQ yakho?
A: Kwimveliso yexabiso eliphezulu, i-MOQ yethu iqala ukusuka kwi-10g, 100g kunye ne-1kg.
Q3: Loluphi uhlobo lwentlawulo olwamkelayo?
A: I-Western Union, iakhawunti yeNkampani, i-BTC, njl
Q4: Njani ngexesha lokuhambisa kwakho?
A: Ngokubanzi, kuya kuthatha iintsuku ezi-3 ukuya kwezi-5 emva kokufumana intlawulo yakho kwangaphambili.
Umbuzo: Usiphatha njani isikhalazo esisemgangathweni?
A: Okokuqala, ulawulo lwethu lomgangatho luya kunciphisa ingxaki esemgangathweni kufutshane ne-zero. Ukuba kukho ingxaki yokwenyani ebangelwa sithi, siya kukuthumela iimpahla zasimahla zokutshintsha okanye ukubuyisela ilahleko yakho.
I-6080-56-4, ekhokelela kwi-diacetate trihydrate
31633-72-4, imethyl 3-methyl-4-oxopiperidine-1-ca ...
73-22-3, L-Tryptophan Umgangatho ophezulu ...
I-600-00-0, i-Ethyl 2-bromoisobutyrate
Igumbi J, iNdawo E, 1 / F, Ukwakha 4, Nombolo 358_368, Indlela yaseKofu, kwiSithili saseJiading, eShanghai